Dhibaatada Siigada badan ay u keento dhalinyarada a-z - Cishqi.com
Dhibaatada Siigada badan ay u keento dhalinyarada a-z
Siigada raga iyo dumarka qaasatan sida ay u siigeystaan a-z iyo dhibaatada siigada badan ay u keento dhalinyarada, hadaba sidee loo joojiyaa siigada?
Dhibaatda siigada badan iyo dhalinyarada
Waa maxay siigada?
Maxaa keeno dhibaatada siigada?
Waa sidee dareenka siigada dumarka iyo raga?
Yaa u badan siigada raga iyo dumarka?
Dhibaatada siigada iyo sida ay u disho raga iyo dumarka
Sida loo joojiyo siigada
1. Dhibaatada Siigada badan iyo dhalinyarada
Haddii aan nahay dhalinyaro waxaan jecelnahay in aynu siigeysano oo aan qancino nafteena. Sabab? Sababtoo ah waxaa mararka qaar naga tanbadinayo dareenka waalida ah ee aan goortaasi dareemeyno.
Dhalinyarada qaar weey ogsoonyihiin dhibaatada siigada ay leedahay, sidaas ay tahayna weey iska tuurtaan. Of course #dhalinyarada tuurato ma ahan raga oo kaliya ee sidoo kale waxaa jiro dumar fara badan oo iyagana iska tuurto markeey baahasha ka wareerto.
Dumarkaasi waxaa kamid ah kuwa aan qormadaan kaga hadalnay: Dumarka farta isticmaalo si ay biyaha isaga keenaan.
2. Waa maxay siigada?
Siigada waa isqancin, waa raaxeysi, waa dareen shahwadeed oo ku yimaado qofka si uu biyaha isaga keeno. Haddii aan si kale u iraahdo, siigeysigu waxa ay ka dhigan tahay in qofku uu naftiisa u raaxeeyo si uu isu qanciyo. Ileyn waa lagu kiciyaye.
Sidee ayuu qofka biyaha isaga keenaa?
Waxa uu qofka isticmaalayaa gacantiisa asigoo taataabanayo meelahaan soo socdo sida:
Xubita taranka (Guska)
Islamarkaana niyeysanayo qofka uu jeclaan lahaa in uu la raaxeysto.
3. Maxaa keeno dhibaatada siigada badan?
Marka aad daawato xabadoo shidan oo kuunto ama daboweyn leh, dhabanada ku xiran dhulka kula gariirayo, dabcan aadan xaas lahayn, weey imaaneysaa siigada.
Waxaad bilaabeysaa islamarkaas in aad baahalka gacanta ku salsalaaxdo, kadibna marka aad indhaha isku qabato waxaaba lagu horkeenayaa Xaliimadii aad xoogaa ka hor arkeysay.
Waxaad galeysaa xoogaa yara xusuus ah, marka aad dib u jaleecdii dabadii weyneyd ee aad hadda arkeysay, baahalka markaan wuuba taagan yahay. Meel aad uga noqoto maba lahan.
Waxaad isdhaheysaa saaxibow adaa waxaan isu keenayee, isqanci oo maskaxda dajiso.
Markaad biyo baxdo kadibna waxaa leedahay shit, maxaa u siigeysatay? Waxaas oo dhan Xaliimadaas ayaa kuu keentay, hadeey kuuntadeeda qarin lahayd, maba aadan siigeysateen.
Marka aad adigana daawato Faarax shidan oo xoogga, quruxda iyo jirka macaan uu leeyahay laga yaabaayo, Xaliimo kastana ay leedahay:
Alla kan hadduu sidaaan kuu qabto, sidaasna kuu gedgediyo, xabadkiisa weynne kugu dulseexsho, adna kolkaaga aad ku kor fariisato, waxaa kaa imaan lahaa dhidid iyo hurdo macaan, daalka hadda ku haayana wuu ku deyn lahaa. Alla muxuu nin yahay kaas.
Sidoo kale markuu Faarax kuu soo diro baahalkiisa weyn ee butaca ah, adigana aad ka sii fikirto sida uu baahalkaasi u muuqdo iyo macaanida uu leeyahay shaki miyaa kaaga jiro in aad siiganeyso?
Jawaabta macquulka: Maya.
Hadaba jooji waxyaabaha nuucaas
Maxaa kaloo keeno siigeysiga?
Daawashada sawirada qaaqaawan
Ka fikirka galmada
Naag la’aan iyo nin la‘aanta
Daawashada filimada xunxun iwm.
4. Waa sidee dareenka siigada dumarka iyo raga?
Dareenka waalida ah ee ay siigada leedahay ma garan karo qof walbaa marka laga reebo Aabaha siigada iyo Atariishada siigada. Faarax iyo Xaliimo oo aan weligood siigeysanin ma dareemi karaan marxaladaan oo kale.
Of course siigadu waa dareen macaan badan laakin ma ahan wax wanaagsan oo la sameeyo. Maxaa yeelay waxa ay kaa dhigeysaa keligii joog, qof bilaa mustaqbal ah, guurna warkii daa.
5. Yaa u badan siigada raga iyo dumarka?
Su’aashani waa su’aal in badan ku soo laalaabatay dadka, marka laga hadlo siigada. Sida dad badani ay qiyaasaan waxaa u badan raga inkastoo ay jiraan gabdho fara badan oo siigeysto.
6. Dhibaatada siigada iyo sida ay u disho raga iyo dumarka
Dhaqaatiirta ka shaqeyso caafimaadka iyo daraasado badan oo la sameeyay, ayaa waxaa lagu ogaaday in siigada ay tahay wax caadi ah oo nolosha kamid ah. Sidaas ay tahay waxaa jiro dhibaatooyin laga dhaxlo siigada.
Haddii aan wax ka soo qaadano waxaa kamid ah:
Waxaad isticmaaleysaa tamar aad u fara badan
Tani waa qasaaraha ugu badan ee uu qofka ka dhaxlo dhibaatada siigada. Waxa qofka ka lumayo tamarta muuqaalka jirka iyo tan maskaxda.
Marka uu qofka siigeysanayo waxaa ka baxayo tamar aad u fara badan. Qofka markuu dhowr jeer ku celceliyo ama uu badsado siigada, waxaa yaraanayo caafimaadka iyo muuqaalka qofka.
In nafaqo fara badan ay qofka ka baxday waxaad ku dareemeysaa, marka uu qofka biyo baxo wuxuu dareemaa:
Wareer iyo daal fara badan
Maskaxda qofka oo iska maqan
In qofka ay caadi la noqoto siigada
Waxaa qofka ku adkaanayo joojinta siigada
Waxaa ka yaraanayo qofka dareenka iyo rabitaanka galmada
Waxa uu qofka la derisayaa madax xanuun, qoor xanuun iyo wareer joogto ah
Waxa uu qofka sameenayaa biyo bax deg deg ah marka uu galmo sameeyo
Waxaa daadanayo tinta qofka
Waxa ay qofka ka dhigtaa caajislow sida in uu gabo shaqadiisa
7. Sida loo joojiyo siigada badan
Sida loo joojiyo siigada badan ma ahan wax adag, waxaa muhiim ah oo kaliya in ay dhab kaa tahay. Haddi aad go’aan leedahay kuguma adkaaneyso in aad joojiso siigada.
Joojinta siigada waa mid ka timaado maskaxda, waa go’aan adag oo ka soo fulo qofka. Hadaba anaga kaama joojin karno siigada balse waxaan ku siin karnaa talo, taasoo haddii aad raacdo ay hubaal noqoneyso in aadan mar dambe siigeysanin.
Talada aan ku siineyno waxaa kamid ah:
Marka hore ka fogow daawashada sawirada iyo muuqaalada kacsiga leh
Go’aan kaa qaado joojinta siigada
Jooji ka fikirka galmada oo isku mashquuli wax kale
Jooji ka sheekeynta galmada
Guurso haddii aadan weli guursan
Marka aad kacsi dareento soon
Haddii aad xaas leedahay ama aad xaas tahay, u muuji lamaanahaaga inuu kacsi ku hayo oo aad u baahantahay
Sheekooyin Qosol Badan Oo Aan Caadi Ahayn